PSJTV | admin
Top admin Stories
"अर्जुन खालिङको सुसाइडनोट"
राजकुमार हिरानीले निर्देशन गरेको चलचित्र सन्जु जुन ३० मा रिलिज हुँदैछ । चलचित्रले बलिउड नायक संजय दत्तको जीवनीलाई पर्दामा उतारेको छ । मुम्बइमा कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । चलचित्रले ...
मादलको तालमा झुमे टोरोन्टोका नेपाली
"होल" मा बसेर "स्नेक" खाँदै "संजु" हेर्दा लागेको कुरा
राजेश मिश्र फुटबल विश्व कपको राप र तापका बीचमा मैले हिजो राती "संजु" हेरें। संजय दत्त "बलिवुड"का एक विवादास्पद चरित्र हुन्। यो सिनेमाले मलाई बिहान चरा चिच्याउने बेला सम्म सुत्न दिएन। सिनेमा ...
म डा. केसी होईन
यादवराज जोशी सामाजिक सञ्जालले बेला बेला मनमा अथलपुथल ल्याईदिन्छ । विचारको भेल नै चलाउछ । हजारौं भेल मस्तिष्कमा कैद हुन्छन । कतै निकास खोज्न सक्दैनन । केही भेल सतहबाट त केही पिंध ...
काठमाडौं । ‘शेरबहादुर देउवा यति सोझा छन् कि उनलाई जसले पनि दुरुपयोग गरिदिन सक्छ’— यो भनाई निकै चर्चित थियो एकताका। आजकाल यस्तो चर्चा छैन, किन चर्चा छैन भने अब उनलाई दुरुपयोग ...
बुगीवुगीको ग्राण्ड फिनाले सुरु!
काठमाडौं: महिनौंपछिको कडा प्रतिस्पर्धाबाट फाइनलमा पुगेका तीन प्रतिस्पर्धीहरु लिएर एपिवान च्यानलले आज बुगीवुगीको ग्राण्ड फिनाले गरिरहेको छ। आजको फिनालेमा तीन प्रतिस्पर्धीहरु कविता नेपाली, प्रगती पुन र सरोज मोक्तानले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। सतप्रतिशत भोटिङ ...
कविता बनिन् बुगीवुगी च्याम्पियन
कविता नेपालीले नेपालमा पहिलोपटक सञ्चालन गरिएको भारतीय फ्रान्चाइजको डान्स रियालिटी सो बुगीवुगी जितेकी छिन्। एपिवान च्यानलले प्रसारण गरेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो डान्सको रियालिटी सो बुगीवुगीको विजेता भएसंगै कविताले रु २५ लाखपनि हात ...
-नेचुरल्लीदीपक शहरकै बीच शहरको चमकले छुन नसकेकाे याे ठाउँ। केही समय अगाडीसम्म घाँसेमैदानले ढाकिएकाे याे स्थानमा विस्तारै घरहरू बढ्दैछन् र मानवीय चहलपहलपनि। नजिकै छ नख्खु खाेला। जुन बग्छ दक्षिणबाट उत्तरतिर। याे खाेलाकाे ...
नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शन
ईन्डोनेसिया: एसियन गेम्स २०१८ मा फुटबलअन्तर्गत 'ग्रुप डी'को आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै एसियन पावरहाउस जापानविरुद्ध केवल एक गोलको पराजय बेहोरेको छ। जापान, पाकिस्तान र भियतनाम सहभागी समुहमा ...
बिष्णु हरि घिमिरे न्युयोर्कले हिउको सिरक फाल्दै थियो, सन् २०१४ मार्च लाग्दै गर्दा, पत्रकार मित्र किशोर पन्थीले प्रस्ताव गरे, नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ नेजाको सदस्यता लिन । “नयाँ र पुराना पत्रकार बीचमा ...
अाशादुकाे अर्थ र लेखनपक्ष
-नेचुरल्लीदिपक अाशादुनै किन? अाशादु अर्थात् 'अांशिक शारीरिक दुर्बल व्यक्ति'नै किन भन्ने प्रश्नकाे उचित जवाफ दिनु पर्ने भएकाले याे छाेटाे लेख तयार पार्दैछु। यसका लागि केही विषयहरुमा छलफल गर्न जरुरी मान्छु म। फरक क्षमता ...
काठमाडौं: तामाङ जातिमा आधारित इतिहास, कला र साहित्यको जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ बुधबारबाट दुईदिनसम्म चल्नेगरि तेश्रो तामाङ ज्ञान महोत्सव सुरु भएको छ। भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको भवनमा प्रदेश नम्बर ३ की ...
डिस्कोर्स डबलीमा राजेन्द्र महर्जन
काठमाडौं: 'कठिन समयमा आलोचनात्मक हुने हाँक' शीर्षक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा चर्चित सम्पादक तथा स्तम्भकार राजेन्द्र महर्जन प्रस्तुत भएका छन्। आरआर क्याम्पस काठमाडौंको पत्रकारिता हलभित्र विभिन्न क्षेत्रका युवाहरुको माझमा अतिथी वक्ताका रुपमा उपस्थित ...
रैछाकुलेको प्रतिमा अनावरण
काठमाडौं: किराती मिथकअनुसार कृषि युगका सुरुवातकर्ता रैछाकुलेको प्रतिमालाई कोटेश्वर महादेवस्थानमा रहेको किरात राई यायोक्खाको केन्द्रीय कार्यालयको प्राङ्गणमा एक भव्य समारोहका बीच अनावरण गरिएको छ। किराती मिथकअनुसार रैछाकुलेले शिकार गरेर ल्याएको ढुकुरले खाएको ...